बिज्ञान र प्रबिधि Archives - Everest Media News
Home बिज्ञान र प्रबिधि
जापानले ड्राइभर बिना चल्ने ट्याक्सि संचालनमा ल्याएको छ । जापानको व्यस्त सडकहरुमा अव ड्राइभर विनानै ट्याक्सी चल...
साधरण तया फोनको मुल्य कति पर्ला ? हजारौं देखि लाखौं सम्मका मोवाईलहरुका मुल्य त तपाई हामीले सनेका अनि देखेकानै...
फेसबुकमा प्रयोग भएका डाटा असुरक्षित रहेको विषय निकै चर्चामा छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले एप्समार्फत...
अहिले नेपाली युवाहरुसँग फेसबुक एकाउन्ट नभएको सायदै कोही होला । फेसबुक एकाउन्ट बनाउने आफ्नो स्टाटस पोस्ट गर्ने...
२७ साउन, काठमाडौं । इन्टरनेटमा कुनै सामग्री हेर्नुपर्दा वा कुनै वेवसाइटमा जान पर्दा अंग्रेजी भाषामा डोमेन नेम...
रोबोट बनाएका १९ वर्षे सुविनको दुखेसो – पैसा भए इन्जिनियरिङ पढ्ने थिएँ……
२७ साउन, बुटवल । रुपन्देहीको रुद्रपुरका १९ वर्षीय युवा सुविन सुनार नयाँ-नयाँ कुराको खोजी गर्थे । उनको यो सानैद...
सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानुन,अनलाईन मिडियालाई वर्गीकरण गर्ने तयारी …..
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोेकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानुनको निर्माणमा सरकार लागेको...
In: बिज्ञान र प्रबिधि, रोचक खबर
जापानले ड्राइभर बिना चल्ने ट्याक्सि संचालनमा ल्याएको छ । जापानको व्यस्त सडकहरुमा अव ड्राइभर विनानै ट्याक्सी चल्ने भएको हो । विश्वमा अहिलेसम्म स्वचालित ट्याक्सी नभएको बेला जापानले पहिलो पटक स... Read more
साधरण तया फोनको मुल्य कति पर्ला ? हजारौं देखि लाखौं सम्मका मोवाईलहरुका मुल्य त तपाई हामीले सनेका अनि देखेकानै छौं, तर भर्खरैमात्रै बजारमा यस्तो मोवाईलको सेट आएका छन् । जसको मुल्य सुन्दैमा हा... Read more
फेसबुकमा प्रयोग भएका डाटा असुरक्षित रहेको विषय निकै चर्चामा छ । क्याम्ब्रिज एनालिटिका नामक कम्पनीले एप्समार्फत फेसबुक प्रयोगकर्ताको डाटा अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा व्यक्तिका बारेमा आवश्... Read more
अहिले नेपाली युवाहरुसँग फेसबुक एकाउन्ट नभएको सायदै कोही होला । फेसबुक एकाउन्ट बनाउने आफ्नो स्टाटस पोस्ट गर्ने तथा अरुले पोस्टमा लाइक र कमेन्ट गर्ने हाम्रो दैनिकी भएको छ । हाम्रो जीवनमा फेसबु... Read more
२७ साउन, काठमाडौं । इन्टरनेटमा कुनै सामग्री हेर्नुपर्दा वा कुनै वेवसाइटमा जान पर्दा अंग्रेजी भाषामा डोमेन नेम हान्नुपर्छ । तर, चाँडै नै नेपाली भाषामा पनि इन्टरनेटको डोमेन नेम उपलब्ध हुने भएक... Read more
२७ साउन, बुटवल । रुपन्देहीको रुद्रपुरका १९ वर्षीय युवा सुविन सुनार नयाँ-नयाँ कुराको खोजी गर्थे । उनको यो सानैदेखिको रुची हो । सुविनले अहिले मानव यन्त्र (रोबोट) बनाएर आफ्नो रुचीलाई आविष्कारमा... Read more
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोेकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ कानुनको निर्माणमा सरकार लागेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा सञ्चालित प्रजातन्त्र सेनानी दयाशंक... Read more
फेसबुकको कार्यालयअब चीनमा खुल्ने…….
फेसबुकले चीनमा कार्यालय खोल्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमाथि चीनमा प्रतिबन्ध छ । तर फेसबुकले चीनमा कार्यालय खोल्नका लागि अनुमति पाएको छ । चिनियाँ डेभलपर तथा इनोभेटका लागि कार्यालय इनोभे... Read more
बक्स अफिस लागू भए पनि निर्माताले डाटा हेर्न पाएनन् पढ्नुहोस पुरा खबर ….
In: बिज्ञान र प्रबिधि, समाचार
साउन १ गतेबाट काठमाडाै भित्रका २० वटा हलमा इ-टिकेटिङ सिस्टमैसँगै बक्स अफिस सर्भर कनेक्सन भयो । सूचना, संचार तथा प्रविधी मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बक्स अफिस लागू भएको औपचारिक घोषणा गरे... Read more
सोसल मिडियामाथि नियमन हुन्छ : सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा….
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोसल मिडियामा आएका सबै सूचना सही हुन नसक्ने भन्दै त्यसमाथि नियमन गरिने बताएका छन् । मूलधारका सञ्चारमाध्यम नियम कानुनको दायरामा हु... Read more